Content Writer ဆိုတာ … – How She Did It
Content Writer ဆိုတာ စာရေးစာဖတ်ကြိုက်သူတွေအတွက် လုပ်လို့ရနိုင်မယ့် အလုပ်နေရာပါ။
လုပ်ငန်း၊အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ဝယ်ယူစားသုံးသူ၊စာဖတ်သူတွေကြား ယုံကြည်မှုရအောင် စာကနေတဆင့် ချိတ်ဆက်ပေးရတဲ့ အလုပ်ပါ။ content ရေးခြင်း အတတ်ပညာကို စနစ်တကျလေ့ကျင့်သင်ကြားထားပြီး စာရေးကျွမ်းကျင်တဲ့ content writer တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ ဘာတွေလိုအပ်မလဲဆိုတာ အောက်မှာဖတ်ကြည့်ရအောင်နော်။။
Content Writer ကဘာတွေလုပ်ရမှာလဲ?
Content writer တွေက လုပ်ငန်းတွေ၊ ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို စာဖတ်သူတွေ ဖတ်ရှုလေ့လာချင်အောင် ရေးသာပေးရတာပါ။ စာပေဆောင်းပါးများ၊ ကုန်ပစ္စည်းကြော်ငြာများ၊ လုပ်ငန်း၊ အဖွဲ့အစည်းအကြောင်းများစတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့ရေးတဲ့ content အမျိုးအစားတွေလည်းပါပါတယ်။ Content Writer တစ်ယောက်ဟာ ဘယ်အချိန်မှာ ဘာရေးရမလဲ၊ ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ရေးရမလဲဆိုတာကို သိနားလည်ပြီး ပညာသားပါပါနဲ့ စာဖတ်သူတွေကို ဆွဲခေါ်ရေးသားတာတွေ လုပ်ရမှာပါ။
Content writer တွေကဘာတွေတာဝန်ယူလုပ်ပေးရလဲ?
Content တွေအချိန်မီပြင်ဆင်ပြီး social media ပေါ်သေသေသပ်သပ်နဲ့ စနစ်တကျတင်နိုင်ဖို့ အချိန်မီ (deadline) မကျော်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ရပါတယ်။ လုပ်ငန်းရဲ့ target audience ကိုတိတိကျကျ နားလည်ပြီး ရှာဖွေဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ရပါမယ်။ Content writing ရေးရာမှာလည်း စိတ်ကူးကောင်းကောင်းဖြင့် ဖန်းတီးရေးသားပေးနိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါမယ်။ မြန်မာစာစာလုံးပေါင်း သတ်ပုံမှန်ကန်အောင် ရေးသားနိုင်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးတဲ့ တာဝန်တစ်ခုပါ။
ဘယ်လို ကျွမ်းကျင်မှုတွေရှိထားဖို့လိုမလဲဆိုတာ အောက်ကအချက်တွေကြည့်ရအောင်
ဘွဲ့တစ်ခုခုရဖို့လိုအပ်ထားပေမယ့် content writing နဲ့ပတ်သတ်တဲ့ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတွေရှိပြီး ဆက်သွယ်ရေး၊ ဈေးကွက်၊ journalism သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာ field မှာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးဖို့လိုပါမယ်။
Content ရေးရာမှာအသုံးပြုရတဲ့ ဒစ်ဂျစ်ဒယ် tools တွေ (eg.Microsoft word, Google application ) တွေကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် သိရှိအသုံးပြုနိုင်ဖို့လိုပါမယ်။
customer ရဲ့လိုအပ်ချက်ကို သိရှိနားလည်ပြီး ရှင်းလင်းထိမိတဲ့ content တွေဖန်တီးတတ်ဖို့လိုပါမယ်။
သဒ္ဒါကောင်းမွန်စွာနားလည်၍ စာကြောင်းတစ်ကြောင်းကို ထိမိရှင်းလင်းအောင် တည်ဆောက်တတ်ဖို့ လိုပါမယ်။
စာရေးရာမှာအသုံးဝင်တဲ့ content marketing theory တွေကို သိရှိရပါမယ်။
ရေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာ၊ ရည်ရွယ်ချက်၊ ဖြန့်ဝေမယ့် channel နေရာ တွေသိရှိရပါမယ်။
Content writer အဖြစ်အလုပ်ဝင်မယ်ဆိုရင် စာရေးတာကို အထူးနှစ်သက် ဖို့လိုအပ်ပါမယ်။
စာနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ ဓာတ်ပုံဒီဇိုင်းတွေကိုလည်း စိတ်ကူးကောင်းကောင်းနဲ့ ဖန်တီးနိုင်သူဖြစ်ရပါမယ်။
စာဖတ်သူတွေ၊ customer တွေကို ဆွဲဆောင်နိင်မယ့် content မျိုးကိုဖန်တီးဖို့ တီထွင်မှုစွမ်းအားလည်းအထိုက်အလျောက်ရှိသူ ဖြစ်ရပါမယ်။
ဗဟုသုတပြည့်စုံဖို့နဲ့ စိတ်ကူးသစ်တွေရရှိဖို့ သုတေသန (research) ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်သူ ဖြစ်ရပါမယ်။
Social media တွေဖြစ်တဲ့ (Facebook, Instagram, LinkedIn, ကုမ္ပဏီ website) စတဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာတွေကို အခြေခံသိနေဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။
Content writer တွေရဲ့ ဝင်ငွေကတော့ အလုပ်ခေါ်စာတွေအရ အချိန်ပြည့်အလုပ်အတွက်ဆိုရင် တစ်လ၃သိန်းမှ၅သိန်းဝန်းကျင်လောက် ရနိုင်ပါတယ်။ အချိန်ပိုင်းအလုပ်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ အပ်တဲ့လုပ်ငန်းရဲ့ အနေအထား၊ အလုပ်နည်းတာများတာပေါ် မူတည်ပြီး မတူနိုင်ပါဘူး။ freelance အလုပ်ဆိုရင်လည်း နာရီပိုင်းအနေနဲ့ပေးတာမျိုးရှိနိုင်သလို အလုပ်သဘာဝပေါ်မူတည်ပြီး ဝင်ငွေကွာပါမယ်။ အချိန်ပြည့်အလုပ်ထက် အချိန်ပိုင်းနဲ့freelance အလုပ်ကိုခေါ်တာပိုများတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အိမ်ကနေပြီးအလုပ်လုပ်ရမှာအပြင် ဝင်ငွေအတန်အသင့်ရမှာဆိုတော့ ပိုပြီးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
အပေါ်မှာပြောပြထားတဲ့ အချက်တွေကိုဖတ်ပြီး content writer တစ်ယောက်ရဲ့ တာဝန်နဲ့ အရည်အချင်းတွေကို သိရှိနားလည်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်ရော content writer တစ်ယောက်လုပ်ဖို့ ကိုယ့်အရည်အချင်းတွေနဲ့ နီးစပ်ရဲ့လား။ အရည်အချင်းတွေပြည့်ပြီလား? ဒါမှမဟုတ် ဖြည့်ဖို့လိုအပ်နေသေးလား?
လိုအပ်တယ်ဆိုရင် How She Did It ကဖွင့်တဲ့ content writer သင်တန်းရှိပါတယ်။ ကဲ အရည်အချင်းတွေထပ်ဖြည့်ဖို့ သင်တန်းတက်ချင်လား အလုပ်လျှောက်ချင်လား ပြောသွားပေးနော်။
Facebook Page Manager ဆိုတာ …⟶